ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ဆက်ဆံပါ (18+) – Gentleman Magazine
သင်က သန်မာတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ကောင်မလေးနဲ့ အိပ်ရာကိစ္စမှာလဲ သူမကြိုက်လောက်မယ် ထင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆက်ဆံပါတယ်။ ပြသနာကတော့ သူမက မြန်တာကို မကြိုက်ပါဘူး။ အနှေးပြကွက်လေးတွေအကြောင်း လေ့လာရင်း နှေးကွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှုပုံစံက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ။
ဘာကြောင့် မိန်းမတွေ နှေးနှေးဆက်ဆံရတာ ပိုကြိုက်တာလဲ??
မိန်းမတစ်ယောက် စိုစွတ်နေတာနဲ့ သူမ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ရောက်တော့မယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ သင် သူမလိုအပ်တယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ အချိန်ထက် နှစ်ဆကြာမှာပါ။ သူမ ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် သင်သိမှာပါ။ မိန်းကလေးတွေက ပြီးဖို့ ကြာမယ့် အချိန်ကို ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ပြီးဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။ သင်က သူမကို ကြာကြာ လှုံ့ဆွပေးလေ သူမအတွက် ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းလာလေပါ။
လိင်ဆက်ဆံရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်မြန်မြန်ပြီးဖို့ ကြိုးစားတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စမှာတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ကောင်းပါတယ်။
သင် အချိန်ယူဆက်ဆံလို့ ဘာပြန်ရမလဲဆိုတော့
-ယောက်ျားတွေဟာ လိင်ကိစ္စပြီးသွားရင် နောက်တစ်ခေါက် ဆက်ဆံနိုင်ဖို့ အချိန်ပိုယူရပါတယ်။ သင် မြန်မြန်ပြီးသွားရင် ပြီးပါပြီ။ ဆက်လုပ်လို့ မရပါဘူး။
– လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ အကိုက်အခဲ၊ နာကျင်ခြင်းတွေကို ပျောက်စေတဲ့ neuropeptides ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတာက Biogesic ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
– သင် အချိန်ယူဆက်ဆံလေလေ၊ ပြီးဆုံးတဲ့အခါ ပိုကောင်းလေ၊ ပိုပြီး ပြင်းထန်လေပါပဲ။
အချိန်ယူပြီး ကြာကြာဆက်ဆံနိုင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ
– သင့်ရဲ့ လိင်ကိစ္စအပြီး သုတ်ရည်ထုတ်လွှတ်မှုကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာလေလေ ပိုပြီး ကြာကြာ ဆက်ဆံနိုင်လေလေပါပဲ။ သူတို့ကို သန်မာစေဖို့ ဆီးသွားရပ်ဖို့ သုံးတဲ့ကြွက်သားတွေကို နှစ်စက္ကန့်လောက် ကြုံ့ထားပေးပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ကို အကြိမ် ၂၀ ကလေ ၆၀ ထိ လုပ်ပေးပါ။
– လိင်ဆက်ဆံတုန်း အသက် ဖြည်းဖြည်းရှုသွင်း ရှုထုတ်ပါ။ ပြီးခါနီးအချိန်တွေမှာ သေချာ အာရုံစိုက်ပြီး ဝင်လေ ထွက်လေ အမြန်နှုန်း မှတ်ပေးခြင်းဟာ သင် မပြီးချင်သေးပဲ ပြီးမသွားစေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
– မိန်းမတွေမှာ G Spot တစ်ခု ရှိသလို ယောက်ျားတွေမှာ နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက Prostrate နားမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက လိင်တံထိပ် ခေါင်း အောက်ဖက်လေးမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဆောင့်ချက်တွေကို မြန်တစ်ချက် နှေးတစ်ချက် ပုံစံပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြင့် ကြာကြာ ခံနိုင်ရုံမက သူမကို ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစေပြီး သင်လဲ ပိုပြီးအရသာကောင်း ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။
သငျက သနျမာတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျပါ။ သငျ့ကောငျမလေးနဲ့ အိပျရာကိစ်စမှာလဲ သူမကွိုကျလောကျမယျ ထငျတဲ့ ပုံစံအတိုငျး မွနျမွနျဆနျဆနျ ဆကျဆံပါတယျ။ ပွသနာကတော့ သူမက မွနျတာကို မကွိုကျပါဘူး။ အနှေးပွကှကျလေးတှအေကွောငျး လလေ့ာရငျး နှေးကှေးတဲ့ ဆကျဆံမှုပုံစံက ပိုကောငျးတယျဆိုတာ လကျခံလိုကျပါ။
ဘာကွောငျ့ မိနျးမတှေ နှေးနှေးဆကျဆံရတာ ပိုကွိုကျတာလဲ??
မိနျးမတဈယောကျ စိုစှတျနတောနဲ့ သူမ ဇာတျသိမျးပိုငျး ရောကျတော့မယျလို့ ပွောလို့မရပါဘူး။ သငျ သူမလိုအပျတယျလို့ ထငျထားတဲ့ အခြိနျထကျ နှဈဆကွာမှာပါ။ သူမ ပွီးတော့မယျဆိုရငျ သငျသိမှာပါ။ မိနျးကလေးတှကေ ပွီးဖို့ ကွာမယျ့ အခြိနျကို ဂရုမစိုကျတတျကွပါဘူး။ ပွီးဖို့ပဲ အရေးကွီးတာပါ။ သငျက သူမကို ကွာကွာ လှုံ့ဆှပေးလေ သူမအတှကျ ပိုပွီး ပြျောစရာကောငျးလာလပေါ။
လိငျဆကျဆံရတာ ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။ အလုပျခှငျမှာ အလုပျမွနျမွနျပွီးဖို့ ကွိုးစားတာ မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကိစ်စမှာတော့ ဖွညျးဖွညျးခငျြးပဲ ကောငျးပါတယျ။
သငျ အခြိနျယူဆကျဆံလို့ ဘာပွနျရမလဲဆိုတော့
-ယောကျြားတှဟော လိငျကိစ်စပွီးသှားရငျ နောကျတဈခေါကျ ဆကျဆံနိုငျဖို့ အခြိနျပိုယူရပါတယျ။ သငျ မွနျမွနျပွီးသှားရငျ ပွီးပါပွီ။ ဆကျလုပျလို့ မရပါဘူး။
– လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ အကိုကျအခဲ၊ နာကငျြခွငျးတှကေို ပြောကျစတေဲ့ neuropeptides ချေါတဲ့ ဓာတျပစ်စညျးတှေ ထုတျပေးပါတယျ။ လိငျဆကျဆံတာက Biogesic ထကျ ပိုကောငျးပါတယျ။
– သငျ အခြိနျယူဆကျဆံလလေေ၊ ပွီးဆုံးတဲ့အခါ ပိုကောငျးလေ၊ ပိုပွီး ပွငျးထနျလပေါပဲ။
အခြိနျယူပွီး ကွာကွာဆကျဆံနိုငျဖို့ ဘာလုပျရမလဲ
– သငျ့ရဲ့ လိငျကိစ်စအပွီး သုတျရညျထုတျလှတျမှုကို ထိနျးထားနိုငျတဲ့ ကွှကျသားတှေ သနျမာလလေေ ပိုပွီး ကွာကွာ ဆကျဆံနိုငျလလေပေါပဲ။ သူတို့ကို သနျမာစဖေို့ ဆီးသှားရပျဖို့ သုံးတဲ့ကွှကျသားတှကေို နှဈစက်ကနျ့လောကျ ကွုံ့ထားပေးပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနကေို့ အကွိမျ ၂၀ ကလေ ၆၀ ထိ လုပျပေးပါ။
– လိငျဆကျဆံတုနျး အသကျ ဖွညျးဖွညျးရှုသှငျး ရှုထုတျပါ။ ပွီးခါနီးအခြိနျတှမှော သခြော အာရုံစိုကျပွီး ဝငျလေ ထှကျလေ အမွနျနှုနျး မှတျပေးခွငျးဟာ သငျ မပွီးခငျြသေးပဲ ပွီးမသှားစဖေို့ ကာကှယျပေးပါတယျ။
– မိနျးမတှမှော G Spot တဈခု ရှိသလို ယောကျြားတှမှော နှဈခု ရှိပါတယျ။ တဈခုက Prostrate နားမှာ ဖွဈပွီး နောကျတဈခုက လိငျတံထိပျ ခေါငျး အောကျဖကျလေးမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ဆောငျ့ခကျြတှကေို မွနျတဈခကျြ နှေးတဈခကျြ ပုံစံပွောငျးလဲပေးခွငျးဖွငျ့ ကွာကွာ ခံနိုငျရုံမက သူမကို ပိုပွီး စိတျလှုပျရှားစပွေီး သငျလဲ ပိုပွီးအရသာကောငျး ခံစားရစနေိုငျပါတယျ။
Previous: ဖြူစင်လှပတဲ့သွားတွေဖြစ်ဖို့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
Next: ဆီးခုံအမွှေးရိတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းများ